Xeer-beegta Dacwadda Manafort oo Kulankoodii Ugu Horeeyay Yeeshay
Xeer beegtada go'aanka ka gaareysa dacwadda ka dhanka ah Paul Manafort oo ahaa madaxii hore ee ololaha doorashadii madaxweynanimo ee Donald Trump, ayaa shaley dhammeeyey maalinti ugu horeysay ee ay ka doodayeen dambiyada lagu soo eedeeyay.
Manafort, ayaa ku eedeysan dambiyo dhowr oo ay ka mid yihiin musuq maasuq, canshuur is-daba marin iyo dambiyo kale
Xeer-beegtan oo ka kooban 12 ruux, lix rag ah iyo lix dumar ah ayaa shaley su'aalo weydiiyey garsoorihi maxkamadda ee dacwadan si uu ugu macneeyo sharciyada qaar waxa loola joodo micno ahaan.
Horraantii shaley, ka dib marki ay su'aalahoodi dhameysteen ayuu garsoore T.S. Ellis u dulmarey doodihi maxkamadda la hor-keenay oo kooban. Wixi intaas ka danbeyeyna, waxaa billowdey doodda xeeer-beegta.
Dacwadda ka dhanka Paul Manafort ayaa xiiso dheeri ah u leh warbaahinta iyo bulshada Mareykanka ah, sababtoo ah waa dacwaddi ugu horeysay ee uu maxkamad hor-keeno Robert Meuller, dambi baaraha gaarka ah ee daba joogo fara-gelinta la sheegay in uu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ka dhacdey 2016-kii ee lagu doortey Donald Trump.